Mark Hughes Oo Ku Booriyay Manchester United Inay Heshiis Cusub U Gacan Geliso Edinson Cavani
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMark Hughes oo ku booriyay Manchester United inay heshiis cusub u gacan geliso Edinson Cavani
February 10, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Ciyaaryahankii hore ee Manchester United weeraryahanka Mark Hughes ayaa ugu baaqay Red Devils inay heshiis cusub ka saxiixdo Edinson Cavani.
Cavani ayaa cadeeyay inuu yahay laacib muhiim u ah Ole Gunnar Solskjaer oo dhaliyay lix gool iyo labo caawin Premier League xilli ciyaareedkan.
33 jirkaan ayaa kaliya qalinka ku duugay heshiis hal sano ah oo uu ku darsan karo sanad dheeri ah markii uu kooxda yimid xagaagii hore, Hughes ayaana qaba in Man United ay hubaal tahay inay sii haysato Cavani muddo dheer.
Isagoo la hadlayey talkSPORT , 57 jirkaan – kaasoo 163 gool u dhaliyey Red Devils – ayaa yiri: “Isbadal ayuu ku sameeyaa United aragtidayda.
“Markii Cavani uu ciyaarayo waxaad dareemeysaa in kooxda ay xoogaa xooga saareyso dhanka weerarka.
Waxa uu lahaa saameyn weyn, hadii ay ahaan laheyd go’aankeyga waxaan la saxiixan lahaa isla markaaba maxaa yeelay waxaan u maleynayaa inuu yahay ciyaaryahan heer sare ah. ”
Cavani ayaa daah furay goolasha isagoo madaxa ku dhaliyay ciyaartii Man United ay barbaraha 3-3 la gashay Everton isbuucaan – goolkiisii ​​labaad ee labo kulan ka dib markii uu shabaqa soo taabtay kulankii ay 9-0 kaga badiyeen Southampton maalmo ka hor.